Sidee dib-u-qabsashadu u saameyn kartaa goobtaada SEO?
Qodobkani, waxaan doonayaa inaan kula wadaagno waayo-aragnimadayda isticmaalka gawaarida gawaarida gawaarida. Taageerada gawaarida badanaa waa fikrad xun oo loogu talogalay dhiirigelinta ganacsigaaga internetka ee soo jiidata mashiinnada raadinta sida firfircoonida firfircoon waxayna ciribtiri kartaa magaca sumcadaaga iyo sidoo kale bogga internetka.
Loogu talagalay ganacsatada internetka ee isticmaalay mid ka mid ah barnaamijyadan si loo abuuro backlinks, waxaan rabaa in aan sharxo qaar ka mid ah sababaha ugu badan ee isticmaalka noocan ah software software SEO weli ma fikrada ugu fiican. Waa aragti gaaban oo ah in la sameeyo hannaanka raadinta raadinta kaas oo sababi kara ganaaxyo culus oo ka yimaada makiinadaha raadinta. Waqtiga iyo lacagta aad maalgashatey hawshani waxay noqon doontaa mid aad u fiican isticmaalka istaraatijiyadaha raadinaya cayaar saaxiibtinimo.
Aragtida dib u qabsiga bogga internetka SEO
Ujeedada ugu muhiimsan ee dib u qabsashada waa in la abuuro xidhiidh ku habboon oo ka dhexeeya laba ilaha webka
Meelo badan oo ka mid ah milkiilayaasha bogga, gaar ahaan kuwa cusub ee ku jira meeshan, waxay ku guuldaraysteen inay ogaadaan in tayada iyo ku-tiirsanaanta dhabarka ay yihiin laba qaybood oo ugu muhiimsan ee dhismaha xiriirka. Nidaamka SEO-ga Online wuxuu diiradda saari karaa tayada iyo tilmaanta tan iyo labadan qaybood oo kuwan ka mid ah waxay u baahan yihiin dareen caadi ah iyo khibradda xirfadlaha ee taabashada. Taasina waa sababta ay u socoto ololaha dhismaha isku xirka, waqtiga iyo dadaalka la isku waafajiyo. Kaliya, kiiskan, ololaha dhismaha ee xidhiidhka wuxuu u adeegi karaa sidii loo hagaajin lahaa tamartaada guud ee goobtaada iyo in aad keento taraafikada tayada gudbinta ee goobtaada. Google
Google ayaa si joogto ah ula dagaallama jiilka xidhiidhka tooska ah
Mashiinka raadinta ayaa aad u qadariya wanaajinta gacanta oo isku day inaad ka hortagto siyaabaha isdaba joogga ah ee bogagga naqshadeynta, iyaga oo ku saabsan tayada hooseeya iyo spamka.
Waxaa jiray mudo markii milkiilayaasha bogagga ay iska indho tiri lahaayeen tayada xidhiidhada dibadda ee tilmaamaya domains. Waxa suurtagal ah in kor loo qaado darajada bogga iyadoo la helayo dib-u-celin dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, xaaladdu waxay noqotaa mid aan la xakamayn, iyo Google waxay sameysatey sharciyo cusub. Sida laga soo xigtay iyaga oo tayo leh oo tayo leh oo tayo leh ayaa si wanaagsan u saameyn kara darajada bogga. Haddaba, su'aasha waa sababta aan u baahanahay inaan maalgashano wakhtigeena iyo lacagkeena nalalka dhismaha ee isku xirnaanta ah ee khadka tooska ah haddii mashiinka raadinta sii wado la dagaalanka xeeladaha dhismaha sida.
Haddii aad boggaaga ku hesho ciqaab aad ku isticmaasho isticmaalka isku xirnaanta isku xirnaanta dhismaha, way adkaan kartaa inaad ku soo celiso dhaawacaaga boggaaga SEO
Waa inaad si taxadar leh u doorataa software-ka dhismahaaga isku xirnaanta sida waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah khiyaamo yar oo tiknoolajiyado SEO ah ujeedada koowaad ee taas oo ah inaad lacagta ku soo jiido. Waxaan si xooggan kugula talinaynaa in aad shaqaaleysid khabiiro SEO khabiiro ah ama sameyso waxkasta naftaada inta lagu jiro geedi socodka xiriirinta jiilka. Haddii kale, dhammaan shaqadaada adag, maalgelinta iyo maalgelinta waxay noqon doontaa waqti qashin ah. Waxaa intaa dheer, waxaad halis u tahay in aad rigoore ka hesho Google taas oo adkaan doonta inaad ku soo noqoto.
In kastoo, kuwa websaydhka ah ee horayba u isticmaalaya software noocan ah ee isku xirka dhismaha, hubso inaad hubin karto dhammaan xiriiriyeyaasha soo socda iyo bogagga ay ka yimaadaan. Intaa waxaa dheer, dhammaan geeddi-socodka waa in ay maamushaan khabiir xirfadlaha ah oo SEO ah oo ku siin kara warbixin xiriiriye kasta oo aad u baahan tahay Source .